Boeny: vita sonia ny Satan’Andraikitra momban’ny «Drafim- panajariana ny faritra» sy ny «Drafitra Ifotony fanajariana ny tany» miisa 13 | Région Boeny
Vita sonia ny zoma 31 mars 2017 teo, tao amin’ny hotely Les Roches Rouges Mahajanga ny Satan’Andraikitra momban’ny «Drafim- panajariana ny faritra» na SRAT ho an’ny faritra Boeny sy ny «Drafitra Ifotony fanajariana ny tany» na SAC ho an’ireo Kaomina miisa 13 ao aminy.
Ny Minisitra eo ambany fiadidian’ny Repoblika misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena, ny Fampitaovana ary ny Fanajariana ny tany, Rafidimanana Narson, notron’ny Tale Jeneralin’ny Fanajariana ny tany no tonga nanatrika ny lanonana fanaovan-tsonia sy ny fanolorana ireo bokin’antotan-kevitra karazany roa dia ny «Drafim- panajariana ny faritra» na SRAT (Schéma régional d’Aménagement du Territoire) sy ny «Drafitra Ifotony fanajariana ny tany» miisa 13 na SAC (Schéma d’Aménagement Communal).
Tonga nanatrika ihany koa ny solotenan’ny fiaraha-miasa alemaina avy any Antananarivo misahana ny PAGE (Programme d’appui à la gestion environnementale)/GIZ izay nanome ny tohana ara-teknika sy ara-bola tamin’ny fampiofanana ireo ekipa teknika avy amin’ny Faritra sy ireo Kaomina namolavola ireo Drafim- panajariana ireo.
Drafim-panajariana: tandrifim-pahefan’ny Faritra sy ny Kaominina
Ny lalàna momba ny Fitsinjaram-pahefana 2014-018, and. 29-30, dia mamaritra mazava fa tandrifim-pahefan’ny Faritra sy ny Kaominina, amin’ny maha Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana azy ireo, ny famolavolana sy fampiharana ny Drafim-panajariana.
Nandritra ny roa taona no nandrafetana azy ireo, ary niara-nisalahy tamin’ireo manam-pahaizana manokana ny teknisian’ny Faritra Boeny, ny Ben’ny tanàna, ny Sampan-draharaham-panjakana isan-tsokajiny notarihin’ny tao amin’ny Fanajariana ny tany. Nidina ifotony im-betsaka izy ireo tamin’izany naka ny hetaheta sy ny fomba fijery isam-pokontany sy isaky ny distrika, avy eo nandravona izany ho vinam-panajarina nandritra ny atrik’asa maromaro.
SAC: 60%n’ny kaomin’ny faritra Boeny
Belobaka, Boanamary, Mahajamba, Marovoay Banlieue, Tsararano, Tsaramandroso, Ambondromamy, Bekobay, Mitsinjo, Antongomenabevary, Matsakabanja, Soalala, Ambohipaky. Ireo ny Kaomina 13 notolorana ny bokin’ny SAC ny zoma teo. Raha atotaly dia 60%n’ny kaomina ato anatin’ny Faritra Boeny no efa manana izany drafitra izany ankehitriny, hatramin’ny taona 2014 no makaty. Fifaliana ho anay ny mahafantatra, hoy ny Lehiben’ny Faritra, Atoa Saïd Ahamad Jaffar, fa fitaratra i Boeny amin’izay lafiny izay manerana an’i Madagasikara.
Drafim- panajariana ny faritra na SRAT
Teny filamatry ny Faritra Boeny nentina nandrafetana azy ny hoe «Boeny Miara-Manonga». Ny Vina enti-manatanteraka kosa, izay ho tratrarina hatramin’ny taona 2036 dia «Faritra Boeny mandroso, ny toe-karena sy ny fiainana ara-tsosialy mifandanja, indrindra eo amin’ny fizarazaran’ny mponina, ary saro6piaro amin’ny tontolo iainany».
SAC-SRAT: fampiharana avy hatrany
Tsiahivina fa ireo Drafitra ireo dia nahazo didim-pitondrana fankatoavana avy amin’ny Ministera sy didim-pitondranam-paritra ka nanomboka ny andron’ny fanaovan-tsonia, ny fanapaha-kevitra rehetra mikasika fanajariana sy ny fampandrosoana ifotony, dia miainga avy amin’izy ireo avy hatrany.
Ny drafitra tsirairay avy dia ahitana mazava tsara ny vinam-panajariana, ireo toro-marika sy ny tanjona isan-tsehatra enti-manajary ny faritra tsirairay avy, ary ny asa fanajariana laharam-pahamehana. Mihatra mandritry ny 20 taona manaraka ny SRAT, ary 15 taona kosa ny an’ny SAC eny anivon’ny kaominina.
Mba tsy ho lasa boky mipirina fotsiny izy ireo, dia natao io zoma io ny fanaova-tsonia ny Satan’andraikitra sy fifanomezana ny teny ierana. Io Sata io dia mamaritra ny andraikitry ny kaominina, ny Faritra, ny Prefektiora, ny Distrika, ny Sampan-draharaham-panjakana voakasika mivantana amin’ny fampiharana azy.
Ankoatra izay dia notolorana solo-saina ireo kaominina 13, raha efa nahazo ny fampitaovana azy ny Faritra Boeny, hanamora ny fampiasana ny drafitra, ny fikirakirana sy fanabeazam-boho ny antontan’isa, ny antonta-tsaritany ary mivohy ny vinam-panajariana nofaritany.